Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Hardware Problems » [solved]မန်မိုရီထပ်တိုးချင်လို့ကူညီပါခင်မျာ။ [Problem]
1 [solved]မန်မိုရီထပ်တိုးချင်လို့ကူညီပါခင်မျာ။ [Problem] on 14th September 2009, 9:04 am
အစ်မတို့ကိုမေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ။ကျွှန်တော်စက်က p4 478ပါခင်ဗျာ။ခုလောလောဆယ်တော့256လေးချောင်းထည့်ထားပါတယ်ခင်
ဗျာ။DDR1 DDR2 ဘယ်ဟာထက်ဆိုက်လို့ရနှိုင်ပါမလဲးခင်ဗျာ
2 Re: [solved]မန်မိုရီထပ်တိုးချင်လို့ကူညီပါခင်မျာ။ [Problem] on 14th September 2009, 9:27 am
3 Re: [solved]မန်မိုရီထပ်တိုးချင်လို့ကူညီပါခင်မျာ။ [Problem] on 14th September 2009, 12:17 pm
lamin wrote: သိတဲ့သူမျာရှိရင်ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ။ ကျွှန်တော်ကကွန်ပြူတာအကြောင်းကိုနာမလည်တလည်ပါ။ကွှန်တော်စက်မှာလေမန်မိုရီလေးထက်တိုးချင်လို့ပါဒါပေမဲ့တိုးလို့ရ၏မရ၏အစ်ကို
အကို အခု စိုက်ထားတာ DDR 1 ဆိုရင်တော့ DDR 1 ပဲ ထပ်စိုက်ရပါမယ် .. အမျိုးအစားတူ frequency တူတာပဲ စိုက်ရမှာပါ .. နောက် အခု လေးချောင်း စိုက်ထားတာဆိုတော့ Bank က ကျန်သေးလို့လားဗျ [You must be registered and logged in to see this image.] .. မကျန်တော့ရင်တော့ အကို စိုက်လို့မရပါဘူး .. [You must be registered and logged in to see this image.] DDR2အမျိုးအစားဆိုရင်တော့ သက်သာမယ်ထင်တယ်နော် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
4 Re: [solved]မန်မိုရီထပ်တိုးချင်လို့ကူညီပါခင်မျာ။ [Problem] on 14th September 2009, 5:30 pm
အောက် ကနေရာလေးမှာ DDR1 DDR2 အကြောင်းလေးတွေပါပါတယ်..သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ...
5 Re: [solved]မန်မိုရီထပ်တိုးချင်လို့ကူညီပါခင်မျာ။ [Problem] on 14th September 2009, 6:33 pm
ီDDR 1 က bank အပြည့်စိုက်ထားတယ်ထင်ပါတယ်............Motherboard ကိုသေသေချာချာပြန်စစ်စေချင်ပါတယ်...........အကယ်လို့Bank လွတ်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ထပ်စိုက်လိုက်ပေါ့..........ဒါပေမယ့် Memory speed လေးကို ဂရုစိုက်စေ
ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ............ကိုယ့် Memory ကဘယ်လောက် speed နဲ ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့......
P4 478 board ဆိုရင်တော့ DDR 400 လောက်သုံးရမယ်ထင်ပါတယ်........အကောင်းဆုံးကတော့
Bank လွတ်သေးရင်.......စက်က Memory ကိုဆိုင်ကပြပြီးဝယ်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲ.........စျေးက
တော့လတ်တလော....DDR 400 512MB ကို ၁၉၀၀၀ ကနေ ၂၂၀၀၀ ထိရှိပါတယ်....... 1Gb ဆိုရင်
6 Re: [solved]မန်မိုရီထပ်တိုးချင်လို့ကူညီပါခင်မျာ။ [Problem] on 14th September 2009, 11:23 pm
တကယ်လို့ထပ်စိုက်မယ် ဆိုရင် တော့ Ram တွေ ကို speed တူတာကလေးတွေ ကိုပဲ စိုက်စေချင်တယ် .. မတူ ရင် ကွန် ပျူတာကို ကြာရင် ပြဿနာ တက်လာနိုင်တယ် ... အပေါ်မှာ ပြောသွားတာလေးတွေ လဲ စုံသလောက်ရှိနေပါပီ ... အဆင်ပြေပါစေဗျာ ...
7 Re: [solved]မန်မိုရီထပ်တိုးချင်လို့ကူညီပါခင်မျာ။ [Problem] on 15th September 2009, 7:50 am
ဖြေပေးတဲ့အစ်ကိုအစ်မများကိိုကျေဇူအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ram တွေကစပိအတူတူကြီးပါဘဲးအစ်ကိုတို့ရေ ram စိုက်ဖို့4ခုပါတယ်4ခုကို256 လေးချောင်းစလုံးစိုက်ထားတယ်မကျန်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိုက်ထားတာကDDR 4000 ပါ
DDR1 သိုမဟုတ် DDR2 စိုက်ချင်ပါတယ် မားသာဘုတ်ကစိုက်လို့ရမရသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ကယ်နားမလည်းလို့ပါအစ်ကိုတို့ရေကျေးဇူအရမ်း
8 Re: [solved]မန်မိုရီထပ်တိုးချင်လို့ကူညီပါခင်မျာ။ [Problem] on 15th September 2009, 12:29 pm
lamin wrote: ဖြေပေးတဲ့အစ်ကိုအစ်မများကိိုကျေဇူအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ram တွေကစပိအတူတူကြီးပါဘဲးအစ်ကိုတို့ရေ ram စိုက်ဖို့4ခုပါတယ်4ခုကို256 လေးချောင်းစလုံးစိုက်ထားတယ်မကျန်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိုက်ထားတာကDDR 4000 ပါ
DDR 1 ထပ်စိုက်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အစားထိုးရမှာပါ .. အကို အခုစိုက်ထားတဲ့လေးချောင်းနေရာမှာ ပြန်စိုက်ရမှာပါ [You must be registered and logged in to see this image.]
9 Re: [solved]မန်မိုရီထပ်တိုးချင်လို့ကူညီပါခင်မျာ။ [Problem] on 15th September 2009, 8:23 pm
တွေကစပိအတူတူကြီးပါဘဲးအစ်ကိုတို့ရေ ram စိုက်ဖို့4ခုပါတယ်4ခုကို256
လေးချောင်းစလုံးစိုက်ထားတယ်မကျန်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိုက်ထားတာကDDR 4000 ပါ
လမင်းရေ Memory speed ကနည်းနည်းများသွားသလားလို့..........DDR1 400 ပါ.......
မင်းရဲ ့memory ကို... အစားထိုးမယ်ဆိုရင် 512 နဲ ့အစားထိုးလိုက်ပေါ့
10 Re: [solved]မန်မိုရီထပ်တိုးချင်လို့ကူညီပါခင်မျာ။ [Problem] on 16th September 2009, 9:47 am
11 Re: [solved]မန်မိုရီထပ်တိုးချင်လို့ကူညီပါခင်မျာ။ [Problem]